Heshiis Ay Wada Gaareen Farmaajo Iyo Rooble Taariikhda Inteysan Ka Gudbin 21 Oktoobar – Great Banaadir
MUQDISHO – Madaxweynaha Muddo Xilleedkiisa Dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Wasiir Koowaadka Dowladda Xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseyn Rooble ayaa waxey gaareen Heshiis ka kooban 6 Qodob, Taariikhda inteysan ka gudbin 21 Oktoobar isla markaana u gudbin 22da Oktoobar ee Sanadkan 2021da; maadaama ay Si Dadban U Xusayeen markii uu Talada Dalka Soomaaliya uu xooga kula wareegay Kelitaliyehii Soomaaliya Jen. Maxamed Siyaad Barre Sanadkii Taariikhda marki ay aheyd 21dii Oktoobar, Sandkii 1969kii.
Heshiishka ay wada-gaareen ayaa waxaa kasoo shaqeeyay Madaweynaha Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftgareen) oo isna Qeyb ka ahaa Xusida Dadban ee Kelitalisnimada ee 21da Oktoobaar ee Sanadkii 1969-kii
Qodobada ay ku heshiiyeen, ayada oo laga soo xigtay Radio Muqdisho; waa kuwa soo socdo:
1. Ayada oo la tixgilinayo dib udhaca kuyimid jadwalka doorashooyinka ayaa madaxda waxey isku raaceen in la dardar geliyo howlaha doorashooyinka, waxeyna ugu baaqeen dowladaha xubnaha ka ah Dowlada Federaalka Soomaliya in ay sida ugu dhaqsiyaha badan kubilaabaan asbuucyada soo socda doorashada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
2. In si dhaw ay u wada shaqeeyaan hay’adaha Amnigu iyaga oo xoogga saaraya adkaynta amniga iyo xasilloonida guud ee dalka xilligan xaasaasiga ah ee dalku ku jiro doorashooyinka, Lana xoojiyo ladaagalanka argagaaxisa ee Alshabaab.
3. In Wasiirka Aminiga Cabdullahi Maxamed Nuur uu sii wato shaqadiisa si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka.
4. In Janaraal Bashiir Goobe loo magacaabo Wasiiru Dowle.
5. Madaxda ayaa isku raacay In Yaasin Cabdulahi Maxamuud (Farey) uu ahaado kusimaha Taliyaha hay’adda Sirdoonka iyo Nabad Sugidda Qaranka (HNSQ) inta Madaxweynahu uu soo marsiinayo Ra’iisul Wasaaraha Taliye iyo Taliye kuxigeen kadibna La soo marsiinayo Golaha Wasiirada, si madaxweynuhu ugu soo saaro digreeto.
6. Madaxda ayaa isku raacay in kiiska Ikraan Tahliil Faarax loo daayo Hay’adaha Cadaaladda iyo Garsoorka, waxaana la faray hay’adaha amnigu in ay gacan ku siiyaan.
CC Shakuur Oo Si Kulul Uga Hadlay Rasaas Ay Ciidanka Dowladdu Ku Fureen Dad Bannaanbaxayay